Bit By Bit - सोध्दै प्रश्नहरू - 3.5.3 Gamification
मानक सर्वेक्षण सहभागीहरू लागि बोरिंग छन्, तर र परिवर्तन हुनुपर्छ गर्न सक्नुहुन्छ।
हालसम्म, म तपाईंलाई कम्प्युटर-प्रशासित साक्षात्कार द्वारा facilitated छन् भनेर सोध्दै गर्न नयाँ दृष्टिकोण बारे मा भने गर्नुभएको छ। तर, कम्प्युटर-प्रशासित साक्षात्कार को एक नकारात्मक त्यहाँ सहभागिता induce मदत गर्न कुनै पनि मानव साक्षात्कारकर्ता छ भन्ने छ। सर्वेक्षण समय-खपत दुवै र बोरिंग छन् किनभने यो समस्या छ। तसर्थ, भविष्यमा, सर्वेक्षण डिजाइनर आफ्नो सहभागीहरू वरिपरि डिजाइन र प्रश्नहरू थप रमाइलो र खेल-जस्तै जवाफ प्रक्रिया बनाउन जाँदैछन्। यो प्रक्रिया कहिले काँही gamification भनिन्छ।
रमाइलो सर्वेक्षण जस्तै लाग्न सक्छ के चित्रण गर्न, गरेको Friendsense, फेसबुकमा एक खेल रूपमा प्याकेज थियो कि एक सर्वेक्षण विचार गरौं। Sharad Goel, शीतकालीन मेसन, र डंकन वत्स (2010) तिनीहरूले आफ्ना साथीहरूलाई जस्तै हो धेरै मानिसहरू कसरी लाग्छ अनुमान गर्न चाहन्थे र कति तिनीहरूले आफ्ना साथीहरूलाई जस्तै वास्तवमा छन्। वास्तविक र कथित मनोवृत्ति समानता बारे यो प्रश्न सही आफ्नो सामाजिक वातावरण बुझ्ने मानिसहरूलाई क्षमता मा सिधै हुन्छ र राजनीतिक ध्रुवीकरण लागि निहितार्थ र सामाजिक परिवर्तन को गतिशीलता छ। Conceptually वास्तविक र कथित मनोवृत्ति समानता मापन गर्न सजिलो कुरा हो। शोधकर्ताओं सिर्फ आफ्नो राय मानिसहरूलाई धेरै सोधे सक्छ र फेरि उनको राय बारेमा आफ्ना साथीहरूलाई सोधे (यो अनुमति दिन्छ वास्तविक मनोवृत्ति सम्झौताको मापन लागि) र तिनीहरूले आफ्ना साथीहरूलाई 'मनोवृत्ति अनुमान गर्न मान्छे धेरै सोधे सक्थे (यो अनुमति दिन्छ को मापन लागि कथित मनोवृत्ति सम्झौता)। दुर्भाग्यवश, यो एक प्रतिवादीको र उनको मित्र दुवै साक्षात्कार गर्न धेरै गाह्रो logistically छ। तसर्थ, Goel र सहयोगिहरु खेल्न मजा थियो कि एक फेसबुक अनुप्रयोग मा आफ्नो सर्वेक्षण गरियो।
एक सहभागी एक शोध अध्ययन हुन consented पछि, अनुप्रयोगलाई प्रतिवादीको फेसबुक खाता बाट एक मित्र चयन र मित्र (चित्रा 3.9) को मनोवृत्ति बारेमा प्रश्न सोध्नुभयो। अनियमित चयन मित्र को बारे मा प्रश्न Intermixed, को प्रतिवादीको पनि बारेमा आफु प्रश्नबारे। एक मित्र बारेमा प्रश्नको जवाफ पछि, प्रतिवादीको उनको जवाफ सही थियो वा उनको मित्र जवाफ थियो भने, प्रतिवादीको भाग लिन मित्र प्रोत्साहन गर्न सक्षम थियो कि भनिएको थियो। तसर्थ, सर्वेक्षण भाइरल भर्ती मार्फत भाग मा फैलियो।
चित्रा 3.9: को Friendsense अध्ययनबाट इन्टरफेस (Goel, Mason, and Watts 2010) । शोधकर्ताओं रमाइलो, gamelike अनुभव मा एक मानक मनोवृत्ति सर्वेक्षण गरियो। अनुप्रयोग सहभागीहरू दुवै गम्भीर प्रश्न र यस्तो यो तस्बिर मा देखाइएको रूपमा थप lighthearted प्रश्न, सोधे। Sharad Goel देखि अनुमति संग प्रयोग छवि।
मनोवृत्ति प्रश्न सामान्य सामाजिक सर्वेक्षण देखि छाँटकाँट थिए। उदाहरणका लागि, "के [आफ्नो मित्र] भन्दा मध्य पूर्व अवस्था मा इजरायल बढी इजरायली समानुभूति?" र "दिनुहुन्छ [आफ्नो मित्र] उच्च कर सरकार लागि विश्वव्यापी स्वास्थ्य हेरविचार प्रदान गर्न तिर्न?" यी गम्भीर प्रश्नहरू शीर्ष मा थप lighthearted प्रश्नहरू मा मिश्रित शोधकर्ताओं: "? [आफ्नो मित्र] बरु रक्सी बियर पिउन दिनुहुन्छ" र "? दिनुहुन्छ [आफ्नो मित्र] उड शक्ति को सट्टा बरु मन पढ्न शक्ति छ" यी lighthearted प्रश्न गरे प्रक्रिया सहभागीहरू थप रमाइलो र पनि एक रोचक तुलना सक्षम: मनोवृत्ति सम्झौता पिउने र superpowers बारेमा lighthearted प्रश्नहरू गम्भीर राजनीतिक प्रश्न लागि समान हुनेछ?
त्यहाँ अध्ययन बाट तीन मुख्य परिणाम थिए। पहिलो, मित्र थप अपरिचित भन्दा एउटै जवाफ दिन संभावना थिए, तर पनि घनिष्ठ मित्र अझै प्रश्नहरू लगभग 30% मा असहमति हुन्छ। दोस्रो, उत्तरदाताओं आफ्नो साथीहरूसँग आफ्नो सम्झौता भन्दा-अनुमान। अर्को शब्दमा, कि मित्र बीच अवस्थित राय को विविधताको सबैभन्दा याद छैन। अन्तमा, सहभागीहरू पिउने र superpowers बारेमा lighthearted मुद्दाहरू भन्दा राजनीतिले गम्भीर विषयमा आफ्नो साथीहरूसँग असहमति सजग हुन रूपमा संभावना थिए।
अनुप्रयोगलाई अब (दुर्भाग्य) खेल्न उपलब्ध छ तापनि, यो एक राम्रो उदाहरण थियो कसरी अनुसन्धानकर्ताहरूले सक्छन् रमाइलो कुरा मा एक मानक मनोवृत्ति सर्वेक्षण। थप सामान्यतया, केही रचनात्मकता र डिजाइन कार्य संग, यो सम्भव सर्वेक्षण सहभागीहरू लागि प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्न छ। त्यसैले, अर्को पटक तपाईं एक सर्वेक्षण डिजाइन गर्दै छन्, तपाईं आफ्नो सहभागीहरू लागि अनुभव अझ राम्रो बनाउन के गर्न सक्छ के सोच्न समय लिनुहोस्। केही gamification तिर यी कदम डेटा गुणस्तर चोट सक्ने डर हुन सक्छ, तर म नरमाइलो लाग्यो सहभागीहरू डेटा गुणस्तर गर्न अझ ठूलो जोखिम हो कि जस्तो लाग्छ।
अन्य डाटा स्रोतहरु गर्न सर्वेक्षण लिङ्क: Goel र सहयोगिहरु को काम पनि अर्को खण्ड को विषय देखाउँछ। Facebook संग सर्वेक्षण लिङ्क गरेर यो मामला मा शोधकर्ताओं स्वतः सहभागीहरू 'मित्र को सूचीमा पहुँच थियो। अर्को खण्डमा, हामी ठूलो विस्तार सर्वेक्षण र अन्य डाटा स्रोतहरु बीच संपर्क छलफल गर्नेछ।